EYurophu Amazwe With The Weather Best | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > EYurophu Amazwe With The Weather Best
EYurophu Amazwe With The Weather Best
Qeqesha ukuhamba iBritane, Qeqesha uhambo ePortugal, Uloliwe eSpain, Travel Europe
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 04/10/2020)
Kunzima ukuthetha into eyenza kangangoko kunye nemozulu embi, ngoko xa ukubhala eYurophu Countries kunye Weather Best asazi ukuba sisondele njani le. Emveni kwakho konke, kuko konke umntu, akunjalo? Ngoko ke sagqiba ukuba ithisisi zethu ukuba 365 imihla kwelanga, umoyana yaye akukho iintshizane zemvula kwenza ukuba imozulu ifanelekileyo, kwaye uqale khona.
Siye sibeke kunye uluhlu kumazwe aseYurophu ngokususela kwiimeko zabo imozulu, kwaye kuxhomekeke kuwe isigqibo apho ufuna ukuya elandelayo:
ilizwe lethu 1st for Europe Countries kunye Weather phambili: Speyin
A Imozulu yeMeditere, sezibonelelo zothutho robust, amathuba amahle ukuba bahambe, kwakunye nemisebenzi eyahlukeneyo nabanye nokuba nexesha lokuphola, ukwenza Spain phantse kwilizwe iphupha. Elise zantsi Europe, ngokuqinisekileyo Spain ayincedi enye kakhulu uhambo ngololiwe intle eYurophu. Speyin uqikelelo lwemozulu ngokutshisa, ehlobo nowobulali, ebusika zemvula. Ekubeni Spain lelinye lamazwe ezinkulu European, has lwemozulu ngaphezu kwesinye. ke, ungalindela ukuba imozulu nempembelelo njengezwekazi ngakumbi ezweni lehewu enkulu central: ulungele hot, ehlobo kunye ebusika obubandayo. translation: ukuba wena akunguye eya Spain uze ucwangcise ekuhlaleni iinyanga ezimbalwa, yiza nesuti yokuqubha kunye nebhatyi.
Photshugo – The 1st on Europe Countries with the Best Weather
Kwabo kuni kengoku kunokuba axhamle 22 ° C kwi-avareji phantse unyaka wonke kunokuba ukubila phandle ngama-35 + ° C, Portugal 1st kwi eYurophu Countries kunye Weather Best. Portugal lichazwa njenge Csb kwemozulu (Eli gama libhekisa kwimozulu yeMeditera); elimanzi efudumeleyo baba ziingcathu ehlathini sezulu, kunye ehlobo, ebusika ezimanzi. Ukuba ehamba ngololiwe, opt for Portugal ngexesha kwiinyanga zasehlotyeni. Le nyanga zishushu e-Portugal yi Julayi kunye lobushushu avareji ye-24 ° C, nalowo eqhaqhazelisa January kwi-12 ° C. Uya ukubamba kakhulu iiyure ilanga yonke imihla ngo-Agasti. Plus, ungahlala ngohambo Western Yurophu ngololiwe ngokuba umbono best, kungakhathaliseki iimeko zemozulu ukuba amazwe ofuna ukubona.
Kwelinye ilizwe lase- eziya kukulahlela uthando nale ngxenye yeYurophu. Greece iyintsobi Imozulu yeMeditere. Wabakhenkethi nabantu balapha uthando ngenxa nehlobo elishushu neyomileyo yayo, wobulali ebusika zemvula, waza ngamaxesha ilanga phantse kulo unyaka. Greece nje omnye wabo Europe Countries kunye Weather Best kwaye kufuneka uye ngaphezu kwesihlandlo ukuqonda ngokupheleleyo ubuhle bayo. Ethetha Imozulu yeMeditere ofezekileyo, nto kuphela fair sinikhankanya Italy nathi, nangona umoya wayo ehlotyeni ukuba kushushu kakhulu, ezingemnandi yezulu wonke umntu axhamle.
ulinganiso lweenkcukacha – The worst on the list of Europe Countries with the Best Weather
Nangona zobugcisa ngokuphelele langa, ngokwembali yokuphila, ulinganiso lweenkcukacha ayikho enye Europe Countries kunye Weather Best. Well, ngaphandle uyayonwabela inkungu njalo, imvula, amafu kunye grey kakhulu ukuba umlibale into eminye imibala ezikhangeleka. Umoya emanzi Ukungaqiniseki kwalo okupheleleyo musa akuncedi nganto. Nangona eBritani unayo ezi- enelanga apha naphaya, sicebisa ukuba ukuba (nanini!) uphume ngaphandle iambrela kunye spare T-shirt. Jonga le 4 umdla train ezimqoka pre-uhambo eYurophu phambi kokuba uye kwi uhambo lwakho.
Kusenokwenzeka ukuba elinye lamazwe kakhulu mihle aseYurophu, Iceland iyazingca phezu amawa yayo omangalisayo, engaphele ndawo landscapes oluhlaza, kwiincam zeentaba njengekhephu-ezimhlophe, kunye neengxangxasi nezisemaphandleni. Oh, masenze ukulibala ezihambayo yayo enkulu, imithombo eshushu kunye ngogesi, kwaye ezinye friendliest, abantu emhlabeni! kunjalo, ngebhadi, eli lizwe yaseScandinavia ke babedume ukuba imozulu ayiqinisekanga libi. Iceland kuye malunga 320 imihla amafu ezingwevu, 215 imihla imvula, kwekhephu, kunye blizzards. Asiyondawo abafuna ukuba sibe vacay sunny.
kunjalo, ukuba ngaba umntu holide zobusika, Iceland wayeza kuba phezu phezulu kuluhlu lwakho Europe Countries kunye Weather Best.
Fumana Europe zakho ozithandayo Amazwe kunye Imozulu Best kuwe! kwaye babe uhambo lwakho! Khetha ukuba ukukhwela uloliwe kwaye incwadi yakho amatikiti etreyini nge Gcina i Train.
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ngoku nqakraza apha: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/europe-countries-best-weather/ - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela)
Ukuba ufuna ukuba nobubele kubasebenzisi bakho, wena ndiyabakhokela ngqo amaphepha ukufuna yethu. Kule ikhonkco, uya kufumana iindlela zethu kakhulu ethandwa uloliwe – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/zh-CN_routes_sitemap.xml, kwaye bangatshintsha / zh-CN ukuya / es okanye / ngayo kwiilwimi ezininzi.
#britian #coldweather #greece #hot #hotweather #iceland #unitedkingdom #sezulu travelportugal travelspain
Indlela To Hlala Safe Ngoxa Driving Ngexesha Winter
Iingcebiso zokuhamba ngeMoto, Iingcebiso zokuhamba, Travel Europe